कस्तो देखियो अनमोल र अदितीको केमेष्ट्री ? (फोटोफिचर) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कस्तो देखियो अनमोल र अदितीको केमेष्ट्री ? (फोटोफिचर)
चलचित्र ‘कृ’ माघ २६ गतेबाट देशव्यापी रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा अनमोल केसी र नव नायिका अदिती बुढाथोकीको लिड रोल छ । यो बर्षको सर्वाधिक प्रतिक्षित चलचित्रको एउटा गीत स्कटल्याण्डमा खिचेर यसको निर्माणपक्ष नेपाल फर्किएको छ ।
‘मैले जानी नजानी’ बोलको गीतको भिडियो स्कटल्याण्डको रमणिय स्थानमा ३ दिन लगाएर खिचिएको छ । यो गीतमा रोदित भण्डारीको स्वर, रोदितकै शब्द तथा रोदित र विशेष पाण्डेको संगीत छ । गीतको भिडियोमा अनमोल र अदितीलाई फिचरिङ गरिएको छ ।
गीतको भिडियो भोली विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । यसैविच, गीत सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि यसका केहि तस्बिरहरु सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा, अनमोल र अदिती रोमान्टिक मुडमा देखिएका छन् ।
सुरेन्द्र पौडेलले चलचित्रको निर्देशन गरेका हुन् । पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहेको यो गीतको भिडियोलाई विक्रम लामा र एन्जिलिना खत्रीले कोरियोग्राफी गरेका हुन् ।